Rev: Audio uye Vhidhiyo Kudhinda, Dudziro, Captioning, uye Subtitling | Martech Zone
Nekuti vatengi vedu vane hunyanzvi hwehunyanzvi, zvinowanzo kutiomera kuti tiwane vanyori vari vaviri vanogadzira pamwe neruzivo. Nekufamba kwenguva, takaneta nekunyorazve, sezvakaita vanyori vedu, saka takaedza maitiro matsva. Isu tine maitiro ekugadzira kwatinomisa chinotakurika podcast studio pane nzvimbo - kana kuti tinovadhira mukati - uye tinorekodha maPodcast mashoma. Isu zvakare tinorekodha mabvunzurudzo pavhidhiyo. Isu tinobva tatumira odhiyo nevhidhiyo kunze kunyora uye kunyora. Isu tinobva tapa chinyorwa kune vanyori vedu vanovabatanidza muzvinyorwa zvemusoro zvatinoburitsa pane yavo blog yevatengi kana kuendesa kune yechitatu-bato indasitiri saiti.
Iyo kambani yatiri kushandisa yeiyi iri Zvak, Inokurudzirwa nekambani inoshamisa yevhidhiyo yatinoshanda nayo, Dzidzisa 918. Mitengo inokwanisika, shanduko yacho inoshamisa, uye kukosheswa kwenyorwa kwave kwepamusoro. Sezvo isu tinosundira vatengi vedu mune yakawanda uye yakawanda vhidhiyo, isu tinodawo kutora vhidhiyo mu-chaiyo-nguva sezvo akawanda mapuratifomu anozotarisa vhidhiyo pasina kutamba odhiyo. Rev inopa iri sevhisi zvakare. Rev inopa anotevera masevhisi:
Kudhindisa Audio - timu yevanodhirowa inotora odhiyo yako yekurekodha uye voinyora kuenda ku99% kurongeka. Isa mafaera ako kuburikidza newebhu kana iPhone Chinyorwa Chinyorwa, uye tora chinyorwa chakazara mukati nekukurumidza semaawa gumi nemaviri. Zvinyorwa zvinoitwa nevanhu, kwete software inozivikanwa yekutaura, saka vanogona kutora yakawanda yeiyo nuance uye nekukwira kwakanyanya kupfuura software. Rev inogona kubata chero chero mhando yemodhiyo fomati (inosanganisira MP12, AIF, M3A, VOB, AMR, uye WAV).
Vhidhiyo Transcript - timu yevanodhirowa inotora yako yekurekodha vhidhiyo uye unoinyora kune 99% chaiyo. Isa mafaera ako kuburikidza newebhu, uye uwane gwaro rakazara mukati maawa gumi nemaviri achangopera. Rev vhidhiyo nyanzvi manyore kunyora mazwi uye akakosha asiri emashoko maficha evhidhiyo yako uye unananise zvirevo kuti uone nguva. Rev inogona kubata chero chero mhando yevhidhiyo fomati (inosanganisira MP12, WMV, M4A, MOV, AVI, VOB, AMR, WMA, OGG). Rev zvakare ine kusangana neYouTube neKaltura.
Vhidhiyo Caption - Ese mafaira echinyorwa ari FCC uye ADA inoenderana uye inosangana neChikamu 508 zvinodiwa. Zvinyorwa zvinoenderana neApple, Amazon, Netflix, Hulu uye mamwe maitiro. Vatengi vanogona kusarudza pakati pemazhinji maficha mafomati mafomati (ese pasina muripo wekuwedzera): SubRip (.srt), Scenarist (.scc), MacCaption (.mcc), Timed Text (.ttml), Quicktime Timed Text (.qt.txt) , Transcript (.txt), WebVTT (.vtt), DFXP (.dfxp), Cheetah .CAP (.cap), Spruce Subtitle File (.stl), Avid DS Subtitle File (.txt), Facebook yakagadzirira SubRip (.srt XML (.xml), nevamwe. Tumira yako vhidhiyo faira, chinongedzo kune yako vhidhiyo yakachengetwa (online vhidhiyo chikuva, FTP, Dropbox, nezvimwewo), kana batanidza neayo API. Iwe uchagamuchira iyo caption faira iyo iwe yaunogona kushandisa ipapo ipapo, isa kune yako online chikuva chesarudzo (semuenzaniso Vimeo, Wistia), kana kurodha muvhidhiyo yako yekugadzirisa software (semuenzaniso Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut Pro).
Dudziro yeVhidhiyo Musoro - Rev inogadzira mutauro wekunze subtitle mafaera emavhidhiyo. Vashanduri vavo vane hunyanzvi vanoshandisa vatengi-vanobvumidzwa tenzi maficha echinyorwa uye vhidhiyo yako kugadzira iyo subtitle faira mumitauro yakasiyana siyana uye mafomati Nekutadza, Rev subtitle mafaera ariwo FCC neADA anoenderana. Dudziro mitauro inosanganisira chiArabic, chiBulgaria, chiCantonese, chiChinese (chinyakare & chakareruka), Czech, Danish, Dutch, Farsi, French, Georgian, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Italian, Indonesian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Romanian, Russian, Slovak, Spanish (European, Latin America, American Spanish), Swedish, Tagalog, Thai. Turkish, Ukrainian, uye Vietnamese.
Rev anowanzo tora mavhidhiyo ekudzidza pamhepo, kudzidziswa, kushambadza, zvekushambadzira, mafirimu mafirimu, mafirimu akazvimirira, uye chero chero imwe mhando yekurekodha Rev anogona kunyora manotsi emisangano, mapoka anotarisa, kutsvagisa musika, kubvunzurudzwa kwethesisi, data rekuyedza, podcast, vhidhiyo mavhidhiyo, uye chero chero imwe mhando yekurekodha. Audio nemavhidhiyo zvinyorwa zvinodhura $ 1.00 paminiti yevhidhiyo, zvine 99% kurongeka, uye 24-awa kutendeuka, iine 100% garandi.
Edza Rev Nhasi!
kuburitsa: Tiri kushandisa chinongedzo chekutumira mune ino posvo uye tinopihwa mubairo kune wese mutengi mutengi watinounza Rev!
Tags: AIFAmazonAmerican Spanish)AMRapuroArabickudhindwa kwezwiAudio Kudhindisa ServiceAVIavid ds musoro wenyaya fairaBulgarianCantonesecheetahChinese (chechinyakare & chakareruka)CzechDanishdfxpDK New MediaDutchfacebook captionfacebook yakagadzirira subripFarsiChiFrenchrechiGeorgianChiJerimaniChiGirikiHebrewHindihuluHungaryIndonesianItalianJapanesekoreanLatin AmericaSUMMARYmaccaptionMOVmp3MP4NetflixNorwegianOggporichaChiPutukezi (Brazil)ChiPutukezi (Portugal)inokurumidza nguva yakatarwa mamesejirevRomanianRussianscenaristSlovakChiSpanish (Europeanspruce musoro wenyaya fairasubripSwedishTagalogChiThai. Turkishnguva yakatarwadzidzira 918transcriptUkrainianVhidhiyo Captionsvhidhiyo Subtitlemavhidhiyo emusorokudhindwa kwevhidhiyoVhidhiyo Transcript ServiceVietnameseVOBwavwebvttWMAWMVXML
Dzorerazve WordPress muMusoro